Ny Tours Luxury tsara indrindra
5 amin'ireo fitsangatsanganana tsara indrindra azonao atao
Ny dian-drano maharitra dia tsy voatery handrava azy io-be dia be ny fomba handehanana manoatra noho ny fitiavam-bavaka amin'izao andro izao. Fa rehefa mikarakara fitsangatsanganana haingam-pandehanana mahazatra, dia tsara foana ny mamandrika miaraka amin'ny orinasam-panajana iray, izay ahafahanao antoka fa hitazona kely ny toeran'ny karbôna. Izy ireo koa dia afaka manampy amin'ny fomba hisafidianana ny toerana azo antoka indrindra azo atao . Na mikasa ny hidina ny reniranon'i Mekong ao Kambodza na ny fitsangatsanganana amin'ny volkano iray any Nicaragua, ireo orinasa fitsangatsanganana efatra ireo dia mivoaka etsy sy eroa ka tsy miala afa-tsy ny dian-tongotra rehefa mamorona fanamby mampientanentana sy mamoron-javatra.
Ao anatin'ny hetsika mba hampihenana ny dian-tongotry ny olona eny an-dranomasina, ny orinasam-pialam-boly "Peregrine Adventures" - orinasa rahavavy mankany amin'ny Travel Intrepid - dia nanambara tamin'ny 2018 fa mety hanafoana ny fampiasana ny plastika rehetra tsy misy afa-tsy (toy ny mololo, tavoahangin-drano ary kitapo plastika ) ao an-tsainy ny fisintonan-drizareo mitaingina fiaramanidina manokana. Ary amin'ny ezaka handraisany anjara amin'ny toekarena ao amin'ny seranan-tsambo ny orinasa, ny ankamaroan'ny sakafo ho an'ny isaky ny dia isaky ny fitsangatsanganana. Peregine dia efa orinasa tsy manara-penitra - ny marika dia mividy kara-bola karbôna mba hanamafisana ny famoahana azy, ary mitazona ny vondrona madinika mba hamerana ny fampiasana fiara lehibe na trano fisakafoana malalaka.
Ny Aqua Expeditions dia mifantoka amin'ny fitsangatsanganan-tsambo manara-penitra sy mandehandeha any amin'ireo renirano malaza indrindra manerantany-avy any Amazona mankany Mekong. Ny fifandraisany amin'ny mponina sy ny fianarana momba ny kolontsainy dia iray amin'ireo karazana traikefa faran'izay mampivelatra indrindra, ary ity dia zavatra iray izay mampiavaka ny Aqua Expeditions sy ny laharam-pahamehana eo amin'ny diany. Nandritra ny fisainana vao haingana dia nianatra momba ny zava-drehetra izahay tamin'ny fivelomana ny fivelomana teo amin'ny tsena mitsambikina mankany amin'ny dian'ny tena manokana hatramin'ny fahazazany ka lasa miondrika. Jereo ny zava-manjo ny Mekong River ao Kambodza sy Vietnam, izay mifandray amin'ny mponina ao an-tampony.
Amin'ny fijerena ny ala mandrakiziana mankany amin'ny sisin'ny volkano iray, dia tsy manara-maso ny mpitsidika Panama mpitsidika Namu Travel noho ny fampisehoana ireo aviavim-pitiavam-pitiavam-pahaizana momba ny tontolo iainana any Amerika Afovoany. Namu dia tsy hanolotra trano fialan-tsasatra ho an'ny mpifindra monina na ny zavatra niainan'izy ireo fa tsy nitafy ny tenany manokana, izany hoe raha milaza izy ireo hoe toerana iray no tsara indrindra ao an-tanàna, dia ho izany. Ambonin'izany rehetra izany dia azo ekena tanteraka, ka matetika ianao dia manana safidy vitsivitsy amin'ny trano sy ny asa atao rehefa manomana ny dia.
Ny fitsidihan'i Namu an'i Costa Rica, Panamà sy Nicaragua - ny iray amin'ireo fifaninanana mahafinaritra indrindra ao amin'ny orinasa dia ny fitsidihana Eko-Friendly Costa Rica. Ny trano fandraisam-bahiny rehetra ato amin'ity lalana ity dia mampiseho fomba fanao mahazatra amin'ny fampiasana ireo mpandraharaha ao an-toerana ho an'ny fitsangatsanganana eo an-toerana, ka ny vola miditra dia mivantana mivantana ao amin'ny fiarahamonina. Ankoatra izany, manantena ireo trano fisakafoanana ho azo atokisana, mampiasa ny vokatra avy any an-toerana sy avy any ivelany. Ireo dia dia manome fahafahana anao hifandray amin'ny fiarahamonina ao an-toerana amin'ny andro iray anaovana asa an-tsitrapo.
Sary Sary: Kuoda Travel. Kuoda Travel
Ny Kuoda Travel dia fiaraha-mientana tsara indrindra amin'ny trano fidiovana ho an'ny fitsangatsanganana fitsangatsanganana manerana an'i Però, Bolivia ary Ekoatera. Ny tena tianay manokana an'i Kuoda dia ny fitiavan'izy ireo mahavariana ho an'ny olona sy ny tontolo iainan'ireo firenena iasan'izy ireo-matetika izy ireny dia mikarakara ireo mpandeha mba handray anjara amin'ny ezaka amin'ny filantrophika, fifanakalozana ara-kolontsaina ary ny traikefa hafa mampanan-karena.
"Isika dia mandray am-pahamendrehana ny andraikitsika ara-moraly sy ara-piarahamonina ary 100% nanolo-tena ho fanohanana ny toetra sy ny fahamarinan-toerana tsirairay-tsy ireo izay vangiantsika ihany, fa ireo toerana izay heverintsika hoe 'trano'," hoy i Kuery Travel Founder Mery Calderon. "Ny singa toy ny kolontsaina, ny lova, ary ny fomban-drazana taloha amin'ny vondrom-piarahamoninay eo an-toerana no tena ifantohanay; Mino isika fa ny fizahantany any Amerika Atsimo dia tokony hanao ny tsara kokoa noho ny loza. "
Tamin'ny taona 2006, rehefa tafintohina tamin'ny fiaraha-monina Andean mitoka-monina tany amin'ny Lohasahan'i Sacerdon i Calderon, dia niaiky izy fa ilaina ny toeram-pampianarana iray ao an-tanàna, ary nanokatra ny Ivotoerana fianarana ho an'ny ankizy tao amin'ny 2007. Ankehitriny, maherin'ny roa ampahatelon'ny sekoly ny sekoly- ireo ankizy antitra dia nitsidika ny Ivotoerana fianarana ho an'ny ankizy ho an'ny fanabeazana sy ny fikarakarana an-tsekoly aorian'ny fianarana, ary ireo mpitsidika mpitsidika Kuoda dia nahatsapa ny hafaliana amin'ny fizarana ny fotoanany hanohanana ireo mpianatra ireo amin'ny dia fianarana, ka maro amin'izy ireo no ho voalohany amin'ny fianakaviany ho any amin'ny lisea sy ny oniversite.
Satria fotsiny hoe mandeha maitso ianao, tsy midika izany fa tsy afaka mamerina zavatra iray mba hahatsiarovanao ny zava-niainanao. Ataovy fotsiny azonao antoka fa manampy ny toekarena ao an-toerana ny fividiananao, izay tokony hataon'ny orinasam-pitadiavam-bola tsara. Ny Malawian Style, ohatra, dia miara-miasa amin'ny tanjona amin'ny drafitry ny fitsangatsanganana.
Ao amin'ny orinasa tantanin'ny National Luangwa National Park any Zambia, ny orinasa Afrikana dia manolotra orinasa telo miorina amin'ny manodidina azy: ny Project Luangwa, ny Tribal Textiles ary ny Mulberry Mongoose. Mpanorina ny Mulberry Mongoose, Kate Wilson sy ny ekipany ao an-toerana, dia mamela ny fandrika ataon'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna izay hita tao amin'ny valan-javaboahary ary nanova azy ireo ho firavaka mahafinaritra izay manazava ny zava-drehetra avy amin'ny volavolan-tsambon'i Zambiana amin'ny volon'ny vorona mpitaingina azy. Ny Tribal Textiles dia mipetraka ivelan'ny valan-javaboary, ary ny fivarotana dia manome asa ho an'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana, izay mamolavola ny tsangambato nentim-paharazana ny Zambian. Ao amin'ny faritra ihany koa ny Project Luangwa, izay mivarotra varotra afrikana samihafa ary manohana ny fiarahamonina ao an-toerana amin'ny alàlan'ny fanabeazana sy ny fitovian'ny lahy sy ny vavy.
Ny Malawian Style ihany koa dia mametraka ny traikefa an-toerana ao Cape Maclear eo amoron'ny Farihin'i Malawi, izay trano fonenan'ny Cape Maclear, izay fikambanana miasa mba hamoronana asa maharitra ho an'ny mponina ary hanome fahafahana hampifandray ny marina amin'ny alalan'ny zavakanto sy ny mozika. Amin'ny alàlan'ny programa, afaka manoratra ny lesona rehetra amin'ny lesona tsy miankina ianao amin'ny kilasy mahandro miaraka amin'ny fianakaviana eo an-toerana.
Fialantsasatra an-tsitrapo - Fomba handinihana
Torohevitra momba ny fialana amin'ny fahadisoana ara-kolotsaina rehefa mandeha
Maherin'ny 10.000 Miles: Inona no Nataon'izy Ireo Hahafantatra An-trano?
Ny fomba hahatongavana ho Mpanafika tompon'andraikitra any Kambodza
Oklahoma City Snow & Ice
Fety sy fetiben'ny martsa any Texas
Ny zavatra tsara indrindra atao any Williamsburg, Brooklyn
Zava-dehibe ny ankizy latsaky ny 10 dia ho tia any Brooklyn
Torolalana ho an'i Cassel malaza any Nord Pas-de-Calais
Hetsi-panoheran'ny Santa Cruz 2016
Ny tanànan'i Pingyao efa voarakitra ela
Mpifanolo: Aostralia sy Nouvelle Zélande
6 Fialam-boly tsara indrindra ho an'ny fianakaviana ao NYC
Mankalaza ny Fetim-pirenena ny Repoblikam-bahoaka Sina amin'ny 1 Oktobra